निसन्तान दम्पत्तिलाई डाक्टरले आँखै अगाडि यौ”न सम्पर्क गर्न लगाए, किन कारण पढ्नुहोस् ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/निसन्तान दम्पत्तिलाई डाक्टरले आँखै अगाडि यौ”न सम्पर्क गर्न लगाए, किन कारण पढ्नुहोस् !
एजेन्सी / सन्तान नभएका दम्पत्ति आफ्नो सन्तान प्राप्तीका लागि चिन्तित भई अनेक उपायमा लाग्छन् । त्यस्तै एउटा घटना बाहिर आएको छ । एक निसन्तान दम्पत्ति उपचारको लागि कथित डाक्टरकोमा गए ।
निसन्तान दम्पतीको उपचार गर्ने डाक्टरले आफ्नै अगाडि यौ”न सम्बन्ध राख्न लगाए । डाक्टरले कसको गल्ती कहाँनिर छ भनेर हेर्न चाहेको बताएपछि दम्पत्ति पनि तयार भए र उनले भने जस्तै गरे ।
उनले दम्पतीलाई आफू नजिक बोलाएर भने कि मेरो आँखा अगाडि शारीरीक सम्बन्ध राख्नु । उनले आफ्नो अगाडि सम्बन्ध राख्दा गर्भवती हुने बताएका थिए। उनले यतिमात्र गर्न लगाएनन् दम्पत्तिसँग पैसा पनि लिए ।
कथित डाक्टरले भने जस्तै गर्दा पनि गर्भवती नभएपछि उनीहरुलाई तनाव हुन थाल्यो । महिलाको स्वास्थ्य बिग्रदै जाँदा अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्यो । उसको उपचारले केही काम नगरेपछि ठगी गरेको शंका लागेर प्रहरीमा उजुरी दिए । प्रहरीले आरोपीलार्ई समातेर १० वर्षको जेल र १० हजार रुपैयाँ सजाय सुनाएको छ ।
मिस्रका विद्वानका अनुसार सिकंदर महानको हातमा पनि यस्तो चिन्ह देखिएको पाइन्छ । सिकंदरको हत्केलामा बाहेक यस्तो चिन्ह अन्य व्यक्तिको हत्केलामा समेत देख्न सकिन्छ । जुन संसारमा ३ प्रतिशत मानिसको हत्केलामा मात्र पाउँन सकिन्छ । भर्खरै हत्केलामा x रेखाको बारेमा जानकारी र यस्तो रेखा हुनेहरुको भाग्यको बारेमा गरिएको एक रिर्सच गरिएको थियो मास्को यूनिभर्सिएटीमा । उक्त रिर्सचले एक पेपरनै निकालेको छ ।
यी ३ राशिका युवती हुन्छन असाध्यै सफल र आकर्षक, कतै तपाई त पर्नुभएन ?